China MULTI-LAYER CONTINUOUS LINE UKUSOMISA abavelisi kunye nabanikezeli |INCHOI
Umda osebenzayo:umatshini wokomisa ibhanti enamaleko amaninzi
I-Multi-layer dryer sisixhobo sokumisa ngokuqhubekayo, esifanelekileyo kwi-curd yebhontshisi eyomileyo, amaqanda afakwe emanzini, iimveliso zeenkukhu, iimveliso zezolimo kunye ne-sideline, iyeza le-herbal yaseShayina, njl. emva kokucoca, ukupheka, i-marinating kunye ne-sterilized bags surface drying and dehydration operations.
Lo matshini sisixhobo sokomisa esingena ngokuqhubekayo esisetyenziselwa ukomisa amaqhekeza kunye namasuntswana ezinto zombuso ezinomoya olungileyo.Umatshini ufanelekile kwizinto ezifana nokuchithwa kwemifuno, amayeza esintu amayeza esintu aseTshayina kunye nabanye, apho iziqulatho zamanzi ziphezulu kwaye ukushisa okuphezulu kokumisa akuvumelekanga.Umatshini uphethe inzuzo, isantya sokumisa ngokukhawuleza, umthamo ophezulu wokunyuka kunye nomgangatho omhle wemveliso.I-dewatered & filtered cake state paste material kufuneka yenziwe ibe ngamasuntswana okanye imicu ngaphambi kokumisa inkqubo.
Izinto eziphathekayo zihanjiswa ngokufanayo kwibhanti ye-mesh ngumphakeli wezinto eziphathekayo.Ibhanti yemesh ngokubanzi ithatha i-12-60 mesh yentsimbi engenasici kwaye izotywa sisixhobo sokuhambisa kwaye ihambe ngaphakathi kwesomisi.Isomisi siqulunqwe ngamacandelo amaninzi.Kwicandelo ngalinye, umoya oshushu ujikeleziswa ngokwahlukileyo.Inxalenye yegesi ephelileyo igqitywe yi-exhaust blower ekhethekileyo.Irhasi yenkunkuma ilawulwa yivalve yokulungisa.Umoya oshushu udlula kwi-mesh-belt egqunywe ngezinto zokuzisa amanzi kude.I-mesh-belt ihamba kancinci, isantya sokubaleka sinokulungiswa ngokukhululekileyo ngokwepropathi yezinto.Iimveliso zokugqibela emva kwenkqubo yokomisa ziya kuwela kumqokeleli wezinto ngokuqhubekayo.Iiyunithi eziphezulu kunye neziphantsi zokujikeleza zinokuxhotyiswa ngokukhululekileyo ngokweemfuno zomsebenzisi.Inani lecandelo linokukhethwa ngokweemfuno zemveliso.
I-1 Umthamo womoya, ukushisa okufudumeza, ixesha lezinto ezinamathele kwibhanti kunye nesantya sezinto zokutya zinokulungelelaniswa ukuze kufumaneke isiphumo esihle sokumisa.
2 Ulungelelwaniso lwezixhobo lugqwesile kakhulu.Ingasebenzisa inkqubo yokuhlamba ibhanti efana ne-netli kunye nenkqubo yezinto zokupholisa ekrwada.
3 Umoya oshushu unokufakwa kwisetyhula, amandla agcinwa kakhulu.
4 Isixhobo esahlukileyo sokwahlula umoya, senza umoya oshushu usasazeke ngokufanayo;oku kunokuqinisekisa umgangatho weemveliso.
5 Umthombo wokufudumeza unokukhethwa kumphunga, ukuqhuba i-oyile yobushushu, umbane, iziko lamalahle kunye nesitovu se-oyile.
I-1) Izicelo ezibanzi: Ixesha lokuhlala / lokumisa lihlengahlengiswa ukusuka kwimizuzu eyi-15 ukuya kwi-120minutes eyenza kube lula ukomisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto eziluhlaza.
2) Ukonga amandla: Iindidi ezahlukeneyo zepateni yokuhamba komoya oshushu kunye negumbi lokomisa eligqunywe kakuhle kunokunciphisa kakhulu ukulahleka kobushushu.Ukujikeleza komoya oshushu kunokwenziwa ukuze kugcinwe amandla.
I-3) Ukomisa okulinganayo: Ukusabalalisa umoya oshushu okwenzelwe ngokukodwa kunye neendawo zokomisa kunokuqinisekisa ukuhamba komoya okufanayo kwicala legumbi lokumisa lonke ukuqinisekisa ukomiswa okufanayo.
4) Ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa: Yonke inkqubo yokomisa izenzekelayo kakhulu.Uyilo olulula kodwa olusebenzayo alukwazi ukunciphisa iindleko zemveliso kuphela kodwa kunye nokugcinwa kunye neendleko zokulungisa.
I-5) Umthombo wokushisa oguquguqukayo: Umthombo wobushushu wokomisa unomphumo, umbane, amanzi ashushu, ioli eshushu okanye i-oyile / igesi / amalahle / i-biomass evutha ijeneretha yomoya oshushu.Singakwazi ukuyila kunye nobunjineli bomthombo wobushushu ohlukeneyo ngokweemeko zokwenyani zabathengi.
6) Iindidi ezahlukeneyo kunye neengqimba zebhanti ze-mesh zifumaneka ngokusekelwe kwizinto ezithile eziluhlaza kunye neemeko zokomisa.
1. Ukomisa okanye ukupholisa izinto ezimanzi zegranular (1-20mm);2. Indawo yebhanti yokumisa: 10-150 M2 3. Ukushisa okumisa: 60-180 degree C 4. Uhlobo lokusebenza: oluqhubekayo 5. Umthombo wokushisa: umphunga, amanzi ashushu, ioli eshushu okanye ioli / igesi / ilahle / i-biomass ijeneretha yomoya oshushu
6. Iindidi ezahlukeneyo zepateni yokuhamba komoya, i-belt layer (1-5 layers) kunye ne-mesh belt ingenziwa ngokwezinto ezithile.
Ngaphambili: IPALLET & BASKET/BOTTLE&UMSHINI WOKUVAVASHA
Okulandelayo: UKUCOCWA KWEPACEJI EGUBHEKO NOKOMISA MOYA (UKUBHEKA) UMDA WEMVELISO